Cnaps – DGI: hampitoviana ny tarehimarika | NewsMada
Natao sonia, omaly, ny fifanarahana eo amin’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy (Cnaps) sy ny Fitantanana foibe ny hetra (DGI). Mikasika ny fametrahana vovonana fifanakalozana antontam-baovao, amin’ny alalan’ny internety, antsoina hoe « e-salariés », ny fiaraha-miasa, hanatsarana ny fanangonana ny hetra sy ny tontolon’ny fiahiana sosialy eto Madagasikara.
Vinavinaina ho azo ampiasaina ity fomba fiasa vaovao ity manomboka amin’ny taona 2021. Mialoha izany, efa mampitovy fomba fiasa ny roa tonta amin’ny fanambarana tokana ny hetra sy ny fandoavana ny latsakemboka mikasika ny fanampiana sosialy ao amin’ny Cnaps.
Ho 15% amin’ny 2023
Amin’ny alalan’ny internety avokoa ny hanaovana ny fanambarana ny hetra sy ny fandoavana azy. Manamora ny dingana fikarakarana ny antontan-taratasy samihafa ity fomba fiasa vaovao ity. Hihatsara ny fampidiran-ketra ka tanjona ny hanatrarana ho 15% ny tahany amin’ny taona 2023, raha latsaky ny 12% ny salanisa amin’izao fotoana izao, ny eto amintsika, anisan’ny ambany indrindra aty Afrika. Nidina ho 8,9% mihitsy izany tamin’ity taona 2020 ity, vokatry ny krizy nateraky ny Covid-19, satria tsy afaka nandoa hetra ny ankamaroan’ny orinasa tsy miankina.